Plastic Snow shọvel na-eyi warara - China Richina
Ịdị No .: H320
N'ozuzu Ogologo: 1200mm
snow mwepụ n'ozuzu ogologo 1200mm
Snow shọvel isi size 320-400mm, eyi ihe agụba na sikwuo fibs.
Snow shọvel na ntụ ntụ ntekwasa ígwè tube handle na ụfụfụ adịgide
Ala D-udi adịgide
snow shọvel Agụba na-ejizi ejikọrọ na ịghasa.
Inogide Aluminium ihu ntọt ịcha ike na ngwá ọrụ ndụ
(Nhọrọ na-enye ohere aluminum / osisi / firberglass handle)
-Achọ ezigbo poli snow Tools Manufacturer & soplaya? Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All na Best Snow shọvel bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Snow Scoop shọvel . Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Manual Snow Pusher na Right-n'akuku Head
Aluminum Car Snow shọvel na telescopic emefu